Semalt Inogoverana Zvimwe Zvinokonzera Mazano Okugadzirisa Kutengesa
Yese nzira yekutengeserana e-commerce inoda imwe nzira yakakwana yekuchengeteka. Kune websaiti yepawebsite,kugara kure nevaseki kunogona kuva chimwe chezvinhu zvinokosha pane zvebasa rako. Muzviitiko zvakawanda, vatengesi vakatarisa nzvimbo kuti vaende navoadmin panel control uyewo data yakakodzera kubva kune mamwe mawebsite. Idzi ruzivo runogona kusanganisira ruzivo rwemutengi wekodzero pamwe chetecredit card data.
Kusimudzira webhusaiti yako kunogona kuva chinhu chakanaka chekuita. Unogona kugara uchidzokakana zvikaitika zvose zvinosvika kumarara pasi - peru vacation cost. Kuchengetedzwa kwekodzero yako yevabereki iri mumaoko emaoko sewebsite yekambaniadmin. Somugumisiro, iwe unobvumira iyo yose yekutsvaga Engine Engine Optimization basa nemitemo kuti iuye kumarara pasi.
Jack Miller, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Muchokwadi we Semalt ,rinotsanangura dzimwe nzira dzekuchengetedza webhusaiti yako kubva kuvashambadzi:
Shandisai mavharosi akachengeteka.
Imwe yenzira dzakaoma dzekuchengetedza kuchengeteka kwewebsite yako ndeyokushandisasafe password passwords. Munhu wese anotengesa anotanga nebasa rekuedza kufungidzira password. Mashoko epasiwedi akafanana sa 12345 haana kuchengeteka uye anogona kuva omumwenyore kufunga. Zvakakoshawo kusashandisa mazwi ayo munhu angafungidzira. Munhu chero upi zvake anowana webhusaiti yako anoda kuva nepfete yakachengeteka. Akushaya simba password kunowedzera kudzvinyirirwa kwewebsite yako kune vanokuvadza.
Dzimwe nzvimbo dzepaIndaneti dzisina kunaka dzinotambudzwa kune dzimwe nzvimbo dzinodhura. Pakugadziranzvimbo yako, zvakakosha kushandisa coding structure iyo inogona kutendera kupindira kubva kumagumo akasiyana. Muenzaniso wakanaka kune dzimwe nzvimbo dzeWPP.Aya mawebsite haana kuchengeteka zvokuti anenge chero ani zvake ane device ye Linux anogona zvechokwadi kusvika ku database. Uyezve, zvishandiso zvakajeka seHavij kanaBrowser Execution Framework (BeeF) inogona kukwanisa kuwana database iri kure kunze kwekuda kushandisa admin password.
Kushandisa kuchengetedzwa kwepasi kune URL kunogona kuchengetedza vashandisi vako kurwisa vamwehack iri nyore kuedza. HTTPS inogona kubatsira munhu kuchengeteka uye kuchengeteka paanopa ruzivo rwomunhu oga kune webhusaiti. Ichirudzi rwekuchengetedza haruitike kune mamwe maIndaneti ekutora mitemo. Zvakakoshawo kukurudzira vashanyi maererano nehutano urwu.
Shandisa kuchengetedza plugins.
Pakubata webhusaiti uye nekugadzira SEO, kune mamwe mapupa anokwanisakuchengetedza kushanda kwewebsite yako. Somuenzaniso, vamwe vanhu vangashandisa BulletProof Security tool kana kunyange iThemes Security. Zvishandiso izvi zvinogonachengetedza chero chinetso chekukanganisa chiripo pane imwe nzvimbo kana shanduro programming interface.
Kuchengetedzwa kwewebsite uye vashandi vayo vanovimba nokukwanisa kwake kuregahackers. Hackers inogona kutora nzvimbo dzezvinhu zvakasiyana-siyana. Chokutanga pane zvose, vanogona kunge vari vekambani yemakwikwi vachiedza kuunza saiti yakopasi. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, vangava vanhu vane vavariro dzisina kunyatsoziva asi vane chivimbo chekushambadzira nechinangwa chekambani yenyu inoshanda.Somugumisiro, inogona kuva chinhu chinokosha kuti ugare kure nevashambadzi, kunyanya kubva pawebsite yepepanhau rekuona. Iri gwaro rinogona kukubatsira kuti uiteizvi sezvaunoita kuchengetedza kwewebsite yako yakasimba. Uyezve, vatengi venyu vanogona kuramba vakachengeteka.